အိမ်ထောင်ရေး သုခကိုပြည့်စုံစေနိုင်မည့် လေ့ကျင့်ခန်း ၁၀ မျိုး - Hello Sayarwon
အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းများကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းသည် အားအင်များကို ပြည့်ဝစေခြင်း၊ စိတ်တက်ကြွစေခြင်းနှင့် အိမ်ထောင်ရေး သုခတို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
အိမ်ထောင်ရေး သုခကိုပြည့်စုံစေနိုင်မည့် လေ့ကျင့်ခန်း ၁၀ မျိုးရှိပါသည်။
ထိုလေ့ကျင့်ခန်းသည် အမျိုးသားများအတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ကီဂဲလေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဆီးခုံနှင့် မြီးညှောင့်ရိုးကြွက်သားများ၊ ပေါင်ခွရှိကြွက်သားများကို သန်မာစေပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိစေပါသည်။
ဆီးသွားသည့်အခါ ဆီးအောင့်သည့်ပုံစံ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဆီးခုံနှင့် မြီးညှောင့်ရိုးကြွက်သားများကို သန်မာစေပါသည်။ အသက်မအောင့်ထားပါနှင့်၊ ထိုသို့ပြုလုပ်နေချိန် ဗိုက်ကိုအားပြုပြီး ညှစ်ထားပါ။
2. ကြမ်းပြင်တွင် ကိုယ်ကိုရေပြင်ညီအနေအထားအတိုင်းဖြစ်အောင် ထောက်ထားခြင်း
ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကာမဆက်ဆံသည့်အနေအထားတွင် သို့မဟုတ် အပေါ်စီးအနေအထားမျိုးတွင် လက်မောင်းသားများကို သန်မာစေပါသည်။
ခန္ဓါကိုယ်နှင့်ကြမ်းပြင်ကို လေးထောင့်ပုံစံဖြစ်အောင် လက်များကိုထောက်ထားပါ။ ခြေများကိုလည်းကော့ပြီးထောက်ထားပါ။ ထိုအနေအထားအတိုင်း စက္ကန့် ၂၀ နေပါ။ ထို့နောက်ခြေဖနောင့်ကို အခြားခြေဖျားများပေါ်တင်ပြီး ၁၀ စက္ကန့်နေပါ။ နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်း ထိုအတိုင်းပြုလုပ်ပါ။
3. လေ့ကျင့်ခန်းဘောလုံးဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း
ထိုနည်းကို ပြုလုပ်ရန် ကိုယ်အနေအထား ဟန်ချက်ထိန်းနိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
လိင်ဆက်ဆံစဉ် ပြင်းထန်သော အားထုတ်မှုများသည် ဒဏ်ရာဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
သင့်ခါး အလယ်ပိုင်းနှင့် အောက်ပိုင်းကို ဘောလုံးကြီးပေါ်တွင်ထားပါ။ လက်ချောင်းများကို လည်ကုတ်ပေါ်တွင် တင်ထားပြီး သင့်ဝမ်းဗိုက်ရှိကြွက်သားများ တင်းလာသည်အထိ ကော့ချလိုက်ပါ။ ၃ကြိမ်ခန့် ပြုလုပ်ပါ။
4. လဲလျောင်းနေစဉ် ခြေထောက်များကိုမြှောက်ထားခြင်း
ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှ အားစိုက်လုပ်ရသောလေ့ကျင့်ခန်းပြီး ပေါင်ရှေ့ပိုင်းကြွက်သားများကို သန်မာစေသောကြောင့် လိင်ဆက်ဆံချိန်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အားစိုက်ထုတ်နိုင်စေပါသည်။
ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ကျောခင်းလိုက်ပြီး ခြေထောက်များကို အရှေ့ဘက်သို့ ကြွပြီး ဆန့်ထုတ်ပါ။ ထို့နောက် ခြေထောက်များကို ကြမ်းပြင်နှင့် ၁ လက်မခန့် အလိုအထိ ဖြေးဖြေးစီပြန်ချပါ။ ၅ ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ။ မိနစ် ၃၀ နားပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်လုပ်ပါ။
ထိုလေ့ကျင့်ခန်းသည်လည်း ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကြွက်သားများကို သန်မာစေခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းစေခြင်းတို့ဖြစ်စေပါသည်။ ထိုလေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ပါက သင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် အတူနေစဉ်တွင် ယခင်နှင့် မတူ ကွဲပြားမှုများကို သတိပြုမိလိမ့်မည်။
ဒိုက်ထိုးသည့်အနေထားဖြင့် ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်နေပါ။ လက်များကို ပခုံးများအောက်တွင်ထားပါ။ ခြေဖဝါးများကို တင်ပါးအကျယ်အတိုင်းချဲထားပါ။ ထို့နောက် လက်များကိုထောက်ပြီး အနိမ့်အမြင့် ပြုလုပ်ပါ။ ခြေဖဝါးများကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုလေ့ကျင့်ခန်းသည်လည်း သင့်အိမ်ထောင်ရေးသုခအတွက် ကျန်းမာစေသောနည်းဖြစ်ပါသည်။
6. လေ့ကျင့်ဘောလုံးခံပြီး အလေးမခြင်း
ထိုလေ့ကျင့်ခန်းသည်လည်း ကြွက်သားထုထည်းများကို ကြီးထွားလာစေပြီး သင့်ကိုကောင်းကျိုးပြုစေပါသည်။ ထို့ပြင် အိပ်ရာပေါ်တွင် နေမည့် အနေအထားများအတွက် ကြွက်သားများကို ပြင်ဆင်ရာလည်းရောက်ပါသည်။
ခါးအလယ်အောက်တွင် လေ့ကျင့်ခန်းဘောလုံးကို ထားပြီး လှဲချလိုက်ပါ။ ထို့နောက် ပေါင် ၂၀ ခန့် အလေးတုံးကို ကိုင်မပါ။ ထိုလေ့ကျင့်ခန်းသည်လည်း သင့်ကို အိပ်ယာပေါ်တွင် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုများ ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ထိုလေ့ကျင့်ခန်းသည် သွေးထဲရှိ တက်စတိုစတီရုန်းဟော်မုန်းဓါတ်ကို မြင့်တက်စေပြီး အောက်ပိုင်း အရိုးကွင်းနေရာများသို့ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပါသည်။ ထို့ပြင် လိင်ဆက်ဆံရာတွင်လည်း ကောင်းမွန်စေပါသည်။ သင့်ကိုယ်ခန္ဓါသည် သန်မာနေပါမှ အားစိုက်ထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
တင်ပါးကိုကော့ပြီး ဒူးများကိုကေါးပြီး ဖြေးဖြေးချင်းထိုင်ပါ။ ထိုင်ချနေစဉ်တွင် ခါးကို မတ်မတ်ဖြစ်စေရန် လက်ထဲတွင် ဝိတ်တုံးများကို ကိုင်ထားပါ။ ထို့နောက် သင့်လက် ၂ ဖက်ကို ပခုံးအမြင့်အထိ ဆန့်တန်းထားပါ။ ထိုသို့ အသက် ၁၅ ခါရှုသည့်အချိန်ခန့် ပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက် ဖြေးဖြေးမတ်တပ်ရပ်ပါ။ တပြိုင်နက်တည်းလက်များကို ကိုယ်ဘေးသို့ ဖြေးဖြေးချင်းပြန်ချပါ။
8. အောက်ပိုင်းကွေးညွတ်သော လေ့ကျင့်ခန်း
ထိုလေ့ကျင်ခန်းသည် အားအင်များကို သုံးနိုင်ခြင်း၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုများအားကောင်းခြင်း၊ ဟန်ချက်ကိုထိန်းနိြုင်ခင်း၊ ကိုယ်အလယ်ပိုင်းကြွက်သားများကို မျှခြေညီစေခြင်းနှင့် အောက်ပိုင်း အရိုးကွင်းနေရာများသို့ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပါသည်။ ထို့ပြင် လိင်ဆက်ဆံရာတွင်လည်း ကောင်းမွန်စေပါသည်။
မတ်မတ်ရပ်ပြီး လက်တစ်ဖက်စီတွင် ဝိတ်တုံးများကို ကိုင်ထားပါ။ ထို့နောက် ဒူးများကို ၉၀ ဒီဂရီ ကွေးညွတ်ပါ။ အနောက်ဖက်ဒူးကို ကြမ်းပြင်နှင့် လက်မအနည်းငယ်ခန့်မထိဘဲထားပါ။ ထိုသို့ အသက် ၁၅ ခါရှုသည့်အချိန်ခန့် ပြုလုပ်ပါ။ နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်း ထိုနည်းအတိုင်း ပြုလုပ်ပါ။
9. တဖြတ်ချင်းပြုလုပ်ရသော လေ့ကျင့်ခန်းများ
သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပြီးချိန်တွင် အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် စက္ကန့်၃၀ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။ တဖြတ်ပြီး တဖြတ် အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ပါ။ သင့်ကိုယ်သင်အနားမပေးပါနှင့်။ ထိုလေ့ကျင့်ခန်း ပုံစံကို တပတ်လျှင် အချိန်အနည်းငယ်ပေးပြီး ပြုလုပ်ပါ။
ထိုလေ့ကျင်ခန်းသည် အောက်ပိုင်း အရိုးကွင်းနေရာများသို့ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပါပြီး သင့်ခါးကိုလည်း လေးလံသော အားကစားပစ္စည်းများကြောင့် ဒဏ်မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ကြမ်ပေါ်တွင် ဝမ်းလျားမှောက်ပြီး ခြေထောက်များကို တင်ပါးအကွာအဝေးအတိုင်းခွဲထားပါ။ ခြေဖမိုးများကိုလည်း ကြမ်းနှင့် ထိထားပါ။ ထို့နောက် ကြမ်းပေါ်တွင် လက်ထောက်ပြီး ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို အရှေ့သို့ဆန့်ထုတ်ပါ။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် သင်သည် အိမ်ထောင်ရေးသုခပြည့်စုံနေစေဦးတော့ လေ့ကျင့်ခန်းများကို မှန်မှန်ပြုလုပ်မှသာ ကျန်းမာသော ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
http://www.livestrong.com/slideshow/1011170-14-exercises-man-should-improve-his-sex-life/ Assessed December 10, 2016
exercise for better sex http://www.womansday.com/relationships/sex-tips/advice/a2072/10-exercises-for-better-sex-112752/Assessed December 10, 2016